राम्रो गरौं को लागी तेस्रो किस्त यस संकलन को अनुहारहरू के फिल्म र टेलिभिजन हाम्रो राखेको छ पुलिस र साहित्यिक जासूसहरू. यो अन्तिम हुनेछैन, तर जो बाँकी अलि बढी विशेष हुनेछ। फेरि, यस लेखमा कुनै तस्विरहरू छैनन् ताकि सबैजना आ-आफ्नो राख्न सक्छन्।
हामीसँग टेलिभिजनहरू छन् माइक हथौड़ा, de Mickey Spillaneर स्पेन्सर, को रोबर्ट बी पार्कर। सब भन्दा भर्खरका मानिसहरू जस्तै साहसी जासूसी Phryne फिशर, को केरी ग्रीनवुड। को जन्मभूमि पेपे कारभाल्हो, शिक्षक को मोन्टलबानर आर्टुरो एन्ड्राड, को इग्नासियो डेल भाले। र दुई सबैभन्दा चिसो, त्यो रुसीको हो अर्काडी रेन्को, उत्तर अमेरिकी बाट मार्टिन क्रूज स्मिथ, र त्यो नराम्रो डेनिस निरीक्षकको कार्ल मर्क, को जुसी एडलर-ओल्सेन.
1 माइक हथौड़ा - Stacy Kach
3 Phryne फिशर - Essie डेविस
4 पेपे कारभाल्हो यूसेबियो पोन्सेलाको रूपमा
5 आर्टुरो एन्ड्रेड - जुआन डिएगो बोटो
6 अर्काडी रेन्को - विलियम हर्ट
7 कार्ल मर्क - निकोलज लाइ कास
माइक हथौड़ा - Stacy Kach
यो बिर्सनु असम्भव छ सैक्सोफोन को हार्लेम निशाचरल अर्ल हेगेन द्वारा, पौराणिक विषयवस्तु टेलिभिजन श्रृंखला को हेडर बाट 'S० को। न त हामी उनलाई घमन्ड र अहंकारी बिर्सन सक्छौं। स्टेसी केच सबै भन्दा राम्रो मा।
मिकी स्पिलेनले हथौड़ा बनायो पुस्तकमा म, जूरी, र ती पहिले बनेका थिए दुई चलचित्रहरू, १ 1952 1982२ र १ XNUMX XNUMX२ मा। तर यो थियो सीबीएस टेलिभिजन श्रृंखला, बाट जारी १ 1984 to 1987 देखि १ XNUMX ,XNUMX, जहाँ उनले सबै सफलता पाए। हथौड़ा एक निजी अन्वेषक हो, उसले आफ्नो बन्दुक भन्छ Betsy र उनी सँधै आफ्नो सेक्रेटरीको पछाडि हुन्छन्। भेल्डा। उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो क्याप्टेन प्याट कक्षहरू, हत्या पुलिस विभाग न्यूयर्क। उसको एउटा पुस्तक, ठूलो अपराध (१ 1967 XNUMX), मेरो पहिलो कालो पढाई मध्ये एक थियो।
हामी जारी राख्दछौं 80। हुनसक्छ धेरै पाठकहरूलाई थाहा छैन कि यो जासूसी कल्पनाको उत्पादन हो रोबर्ट बी पार्कर। यस अपराध उपन्यास लेखक, जो पहिले एक पब्लिसिस्ट थिए र पछि बोस्टन विश्वविद्यालयमा काम गरे, यसलाई बनायो द गोडवल्फ पाण्डुलिपि, को पहिलो 35 तपाईंले यसको बारेमा पोस्ट गर्नुभयो।
स्पेन्सर एक छ पूर्व बक्सर र पूर्व पुलिस बोस्टनबाट जो एक निजी जासूसको रूपमा काम गर्छन्। संग बस्छ उनको प्रेमिका सुसान, र तिनीहरूको केस खाता समाधान गर्न उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी हकसँग, जो कानून बाहिर बस्छ। को ए बी सी तिनीहरूको कथा टेलिभिजन श्रृंखला मा अनुकूलित स्पेंसर, निजी जासूस. उसको अनुहारले उसलाई लहरायो रोबर्ट उरीच, ती बर्षको सब भन्दा राम्रो टेलिभिजन अभिनेता मध्येका एक (र चाँडै हराउँदै)।
Phryne फिशर - Essie डेविस
अब प्रकाशित भयो दोस्रो उपन्यास यो चरित्र अष्ट्रेलियाई लेखक द्वारा बनाईएको केरी ग्रीनवुड। उसको सफलता यस्तो थियो कि उसले पहिले नै गरिसकेको छ तीन मौसमaटिभी श्रृंखला, त्यो कहाँ छ बीस को दशकबाट परिष्कृत र निडर जासूस अभिनेत्रीले यो जीवनमा ल्याउँछिन् Essie डेभिस। तिनीहरूको कथाहरूको सेटिंग, संगीत र मनोरञ्जन त्रुटिहीन र आनन्दित प्रेमीहरू हुन् पुरानो श्रृंखला.
पेपे कारभाल्हो यूसेबियो पोन्सेलाको रूपमा
हामी भेट्न यी भागहरूमा आएका छौं सब भन्दा क्लासिक को एक (अरू कसैको अनुमतिले) र राष्ट्रिय जासूसहरूको प्रशंसनीय। मास्टरको महान र प्रभावशाली सिर्जना गर्न मानुएल वाजक्ज मोन्टलबान उसले आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध अनुहार उसमा राखे युसेबियो पोंसेला १ 1986 XNUMX TVE श्रृंखलामा। तर उनीहरूले आफ्नो अनुहार पनि हेराए कन्स्टान्टिनो रोमेरो y जुआन्जो पिइगकोर्बे, फ्रान्सेली संस्करणमा पछि।
आर्टुरो एन्ड्रेड - जुआन डिएगो बोटो
En हिउँमा मौन (२०११), जेरार्डो हेरेरो द्वारा फिल्म जुन उपन्यास अनुकूल छ अनौंठो सम्राटहरूको समय, को इग्नासियो डेल भाले। थियो दोस्रो उपन्यास कप्तान अभिनीत आर्टुरो एन्ड्राड, स्पेनी पोस्टवार युगको अन्धकार विगतको एक सैन्य मानिस। यो कहानी दोस्रो विश्व कपको मध्यमा सोभियत लेनिनग्राडमा सेट गरिएको छ। म प्रेमिका जुआन डिएगो बोटो जस्तै साहित्यिक एन्ड्रेड, र यसलाई कारमेललो गोमेजको अधिक बलवान र अभिव्यक्त शरीरको लागि सीधा परिवर्तन गर्नुहुने थियो।
अर्काडी रेन्को - विलियम हर्ट
र हामी फर्कन्छौं सोभियत संघ किनभने त्यहाँ छ अर्काडी रेन्को, धेरै रूसी, उदासीन र विशेष अन्वेषक त्यो उत्तरी अमेरिकी बनायो मार्टिन क्रूज स्मिथ। को पहिलो शीर्षक of को श्रृ that्खला (श्रृ the्खला) श्रृंखला, गोर्की पार्क, एक सफलता थियो र मा फिल्म गर्न अनुकूलित थियो 1983. म ती सबै सिफारिश गर्दछु। र मेरो अर्काडी रेन्कोको अनुहार छैन विलियम हर्ट, तर हर्टलाई थाहा थियो कि कसरी उसलाई चिसोपनको अंश दिने जसलाई कथाको प्रस context्गले आवश्यक पर्दछ।
कार्ल मर्क - निकोलज लाइ कास
हामी परिवेशको चिसो छोड्दैनौं र अन्तमा जान्छौं डेनमार्क, संग जहिले पनि मूडी र गाह्रो इन्स्पेक्टर कार्ल मर्क। लेखकको जीव जुसी एडलर-ओल्सेन सफल श्रृंखला को नायक हो विभाग Q। पहिले नै छन् छवटा शीर्षक प्रकाशित भयो र सातौं यहाँ देखा पर्नु पर्छ।
र तिनीहरू जान्छन् तीन चलचित्रहरू त्यो पहिलो तीन उपन्यास एकदम राम्रो अनुकूलन: पर्खाल कोरेखा को महिला, पासोमा परेका केटाहरू y बोतलमा सन्देश। सबै डेनिस अभिनेता अभिनीत निकोलाज लाइ कास, जटिल Mørck embroidering। नर्डिक अपराध उपन्यासका प्रेमीहरूको लागि आवश्यक।